केशब स्थापित गलहत्तिको नालिबेली - Sadrishya
केशब स्थापित गलहत्तिको नालिबेली
-सञ्जिव कार्की Nov 06, 2018
दुर्लभ भैरव नृत्यको नृत्यकार केशब स्थापित शायद नाँच्नुलाई सधै आफ्नो सौख सम्झन्छन । त्यसैले राजनीतिक जीवनमा पनि सधै र धेरै दल र शक्ति केन्द्रतर्फ नाँच्दै हिड्नु उनको लत हो । लागेको लत सहजै भुल्न पनि सकिदैन । यहि लत भुल्न नसकेर स्थापित राजनीतिबाट बिस्थापित बन्दैछन् ।
राजनीतिमा जे बाहिर देखिन्छ, देखाइन्छ त्यो भित्र नहुन सक्छ । कार्य सम्पादन र मुख्यमन्त्रीसँग भनाभैरी भएको कारण देखाइएको भए पनि अन्तर्य त्यहि नै हो स्थापित गलहत्याइनुको मूल चुरो त्यहि हो भनेर विश्वास गर्ने प्रशस्त आधार र कारण छैनन् । अक्षम्य गल्ति गरेर बर्खास्त गर्नुपर्ने कारण मुख्यमन्त्रीसँगको सामान्य असमझदारी मात्रै हो कि अरु पनि गम्भिर मत भिन्नता र नैतिकता च्युत हुने कारण छन् व्यक्तिको भित्रि मनको तल्लो तहमा जमेर बसेको ईस्याहा र डाह अनि बदलाको भावना त् कतै छैन , समयक्रममा बाहिर आउछ नै । तीन नम्बर प्रदेशको पहिलो भौतिक र पूर्वाधार मन्त्री पदीय मर्यादाभन्दा बाहिर गएर अभद्र ब्यबहार गरेको कारण कार्यबाही स्वरूप मन्त्रीबाट निकालिनु निश्चय नै संघीयता कार्यन्वयनको चरणको दाँतमा ढुंगा परेको स्थिति हो।
केसब स्थापित आशा गरिएका पात्र हुन् जति गफ लडाए पनि काम गर्ने सबालमा जनताको नजर परेका व्यक्ति हुन । २०५४ सालमा भएको स्थानीय निकायमा काठमाडौँ महानगरमा निर्वा्चित मेयर स्थापित केहि राम्रा काम गरेर नै चर्चा र जनताको नजरमा परेका मेयर हुन् । आधुनिक काठमान्डौंमा आशा र उर्जाको प्राण भर्ने मान्छे हुन । उत्साहित पार्ने प्रेरणा भर्ने र झिलिमिली सपनाको खेति गर्ने मान्छे हुन् केसब । बाबु बितेको बेला पनि सडकमा बसेर स्काभेटरसंगै कामलाई प्राथमिकता दिएको बेलादेखि केसब खासगरी चर्चा र आशाको नजरमा थिए । यद्दपी आज पनि पुरै आशा मारीसकिएका मन्त्री होइनन । प्रदेशस्तरीय मन्त्रीहरुको बथानमा यिनको उचाई अरुको भन्दा अग्लो नै देखिन्छ ।
राष्ट्रियस्तरको व्यक्तित्व भएका काठमाडौँको रैथाने नेवार हुन । उपत्यकाभन्दा बाहिर पनि सांगठानिक सञ्जाल भएका सबैले चिनेका बुझेका र जानेका खरो र स्पष्ट बक्ताको रुपमा यिनको व्यक्तित्व बनेको छ । बोलीहाल्ने सपना देखाई हाल्ने योजना सुनाई हाल्ने, आशाबादी बन्न प्रेरित गर्ने व्यक्तिको रुपमा नेता कार्यकर्ताको वीचमा छवि निर्माण गरेका स्थापित काम नगर्ने, कुरा मात्रै गर्नेको भिडमा काम गर्ने मान्छे हुन् भन्दा प्रशंसा नहोला । जोखिम लिन र छुद्रदेखि खुद्रा कामसम्म गर्न पछि नपर्ने केसब स्थापितमा व्यापारिक योजना र सपनाको जाल बुन्न सधै अरुलाई अपत्यारिलो लाग्नेकुरा चाखलाग्दो गरी भन्ने खुवी छ । यिनका योजना र सपना पत्याउँने मात्रै हो भने हाम्रा गरिबी, असमानता र पछौटेपन सकिन धेरै कुर्नु पर्दैन ।
तर, विधिको बिडम्बना उनी संघीयता अभ्यास शुरुको चरणमै कार्यबाहीमा परे । मन्त्री पद गुमाउँने पहिलो प्रादेशिक मन्त्रीमा दर्ज भए । के पी ओलीको सरकारमा केन्द्रीय मन्त्रीबाट अमर्यादित बोलीको कारण आलोचित भएर कानुन मन्त्री शेरबहादुर तामांग बाहिरिनु पर्यो भने बोलीकै कारण स्थापित पनि ३ नम्बर प्रदेशबाट गलहत्याएर निकालिए । यो सौभाग्य हो कि दुर्भाग्य प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो बोलीकै कारण आलोचित पनि उत्तिकै छन् जति प्रसंसित ।
स्थापितको जागिर खोसिएपछि अब राजनीतिको कोर्ष कसरी बढ्छ ? कतै नेकपाको आन्तरिक राजनीतिमा असर गर्न सक्छ कि या मात्र स्थापितको मन्त्री जागिर चट ? पार्टी भित्र प्रभाव र शक्तिका दृष्टिमा स्थापित मजबुत नभएको कारण कुनै तरंग उत्पन्न हुने संकेत देखिन्न ।
स्थापितको विगत पनि सरसर्ति हेरौ, जसले उनको बारेमा धारणा बनाउँन सजिलो हुन्छ । जहाँ स्थापित त्यहाँ विरोधाभाष र अनेकन किस्सा अनि उपमा र उपमेय भनेर सबैले चर्चा गर्छन । २०४७ सालमा तत्कालिन एमालेको शक्तिशाली भातृ संगठन प्रजातान्त्रिक राष्ट्रिय युवा संघका संस्थापक महासचिव जसको अध्यक्ष ओली थिए । ओलीपछि अध्यक्ष बनेका स्थापित जहाँ पुग्नुपर्ने हो त्यहा पुग्न सकेनन । आज प्रदेश सरकारको मन्त्रीसमेतबाट विस्तापित हुनुपर्यो । यसको कारण उनमा रहेको अस्थिरता पनि हो । स्वभावगत कमजोरी उनको राजनीतिको गन्तब्य छुट्नुमा रह्यो । उनीभन्दापछिका युवा संघ हाक्ने नेताहरु पदाधिकारी र स्थाई कमिटिको सदस्य अनि राज्यको पावरफुल मन्त्री बनिसक्दा पनि स्थापितलाई भने प्रदेशमन्त्रीबाट पनि हात धुनुपर्ने स्थिति आइलाग्यो । राजा ज्ञानेन्द्रको टिके मेयर, प्रजापरिषद्को अध्यक्षदेखि माले माओवादी अनि संघीय समाजवादी पार्टीसम्म भ्रमण गर्न भ्याउँने स्थापित अत्यन्त भ्रमण प्रीय राजनीतिकर्मी हुन् । एकै ठाउँ एकै परिवेशभन्दा विविधता मन पराउँने स्थापित जहिल्यै नाचेको नाचेकै गर्छन ।
लोपोन्मुख भैरव नृत्यका दुर्लभ नृत्यकार स्थापित नाच्नुलाई आफ्नो सधै सौख सम्झन्छन, शायद । त्यसैले राजनीतिक जीवनमा पनि सधै र धेरैतिर नाच्नु उनको लत या आदत हो । आदत र लत भुल्ने कुरा पनि होइन । यहि लत र आदत भुल्न नसकेर स्थापित सधै रनभुल्ल छन् ।
हालसालै नेपालमा पनि चर्चा र आतंकको रुपमा भित्रिएको #मि टू अभियानको पहिलो निशाना पनि स्थापित नै बने । अरु कति यो #मि टूको भयले सिद्दिने हुन क्यारियर गुमाउने हुन । काठमाडौँ महानगरपालिकाको आफ्नै पूर्व कर्मचारी रश्मिला प्रजापतिको आरोप कति सत्य कति झुट त्यो अनुसन्धान होला, तर यसले पनि स्थापितलाई अप्ठ्यारो पारेको बुझ्न कठिन थिएन ।
राजनीतिबाट करिब करिब ओझेल परिसकेका स्थापितलाई पून काखी च्यापेर प्रदेश सभा सदस्य हुँदै मन्त्री बनाएर ओलीले ठुलो अवसर दिएका हुन, तर अवसरको सदुपयोग गर्न सकेनन जिरो पर्फर्मेन्सको बात लागेर बाहिरिनु उनका लागि र ओली स्वयंका लागि घाटाको कुरा हो ।
२०५१ सालमा धेरै बिबाद र तीव्र आलोचनावीच पनि स्थापितले खेलकुद परिषद्को सदस्य सचिव भएर रामरी काम गरेका थिए, त्यसैले २०४९ को स्थानीय निकायको चुनावमा उपमेयरमा पराजित स्थापित २०५४ मा महानगर पिता बन्न सके । धेरै बिबादका बाबजुत पनि राम्रा र उदाहरण योग्य काम गरेर स्थापित बिकासप्रेमी नेता कहलाउँन सफल भएका थिए ।
अफसोच त्यो लोकप्रियता धेरै टिक्न सकेन । फलत माले एमाले बिभाजन ताका नेपालका टपटेन भ्रष्टचारी नेतामध्ये बामदेवपछि दोश्रो नम्बरमा स्थापितको नाम घोषणा गरेको थियो एमालेले ।
जहाँ स्थापित त्यहाँ उपद्रो र उत्पात । आफु र आफुसंगै निर्वाचित तत्कालिन उपमेयर बिदुर मैनालीमाथि यिनको एक्सन सम्झन लायक छ । कुनै सरकारी कर्मचारीको सरुवा, पदस्थापन झैँ उपमेयरलाई नियम बिपरित लेखनाथ नगरपालिकामा काज सरुवाको पत्र थमाएर धमाका खडा गरेका थिए । यो घटनाबाट बुझ्न सकिन्छ नीति नियम कानुन र बिधि विधानलाई यिनको मनमर्जी र लहडले धोति लगाइदिन्छ ।
बिबादास्पद र घटिया हर्कतका बकितम उनकै मुखबाट सुनिएको कुरा यहाँ छुट्यो भने उनको बारेमा बुझ्न कमि रहन्छ । हालकी राष्ट्रपति बिद्या भण्डारीलाई कृष्णप्रसाद भट्टराईसंगको उपचुनाव प्रचारको बेला यस्तो भएको थियो भनेर उनले भनेका छन् । एमालेको तत्कालिन चुनावी सभामा बिद्या भण्डारीको बिधुवा भेष सेतो साडीमा रातोमसी रगत जस्तो देखिने छर्किदिएर कांग्रेसले छर्केको भनेर प्रचार गरियो । उनले यो चुनावी तिकडमको जसरी गर्वसाथ प्रचार गरे, तर न्याय नैतिकता र इमानमा रहने एमाले नेताकार्यकर्ताको लागि सरम र लाजमर्नुको बिषय बन्यो ।
हालको माइतीघर मण्डला रहेको ठाउँ व्यस्त बजारको रुपमा थियो । उनले सडक अतिक्रमण गरेर बनाएको बजार नै भत्काएर रातारात आकर्षक मण्डला तयार पारे । कालिमाटी कुलेश्वर खण्ड विस्तार गरेर जनताको नजरमा बिकासप्रेमी नेताको उपमा पनि पाएका मान्छे हुन । समग्रमा क्षमता भएका नेता मै पर्छन स्थापित, तर अस्थिरता र आफ्नो योजना र सपनाभन्दा अरुको योजना र सपना कम आकने स्वभाव उनको कमजोरी हो ।
जता गए पनि जुन पद पाए पनि बिबाद र प्रतिबाद अनि गलहत्याइ माग्ने नियति शायद यिनको जन्मको घोषित लेखा नै छ । आफ्नो मेयरको कार्यकालमा उपमेयर बिदुर मैनालीलाई कर्मचारीलाई झैँ काज सरुवा गरेर उपद्रो गरेर जग हसाएका थिए । राजा ज्ञानेन्द्रको टिके मेयरमा पनि यिनी टिक्न सकेनन ।
माओबादीलाई आश्रय दिएको बहानामा घोक्रेठ्याक पाए । २०६४ मा माओबादीले जितेपछि बाबुराम प्रधानमन्त्री भएको बेला देश बनाउने भिजन भएको व्यक्ति भनेर काठमाडौँ बिकास प्राधिकरणको प्रमुखमा बाबुरामबाट नियुक्ति पाए पनि कामभन्दा कुरा नै बढी भन्दै त्यँहाबाट पनि पद मुक्त गराइए । हाल आएर दुई नम्बर प्रदेशसभाको शक्तिशाली भौतिक पूर्वाधार बिकास मन्त्रीबाट पनि त्यस्तै हट्नु पर्ने अवस्था आयो ।
हरेक व्यक्तिको उत्थान र पतनमा अरुको भन्दा स्वयं आफ्नै हात बढी र कारक बनेको हुन्छ । तत्कालिन काठमाडौँ महानगरका प्रमुख स्थापित र २०५४ मा हेटौडा नगर पालिकामा प्रमुख बनेका हालका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलवीच कतै कुनै बेला सुसुप्त अवस्थामा रहेको इगोले पनि बादबिबाददेखि बर्खास्तिसम्म काम गरेको नहोला भन्न सकिन्न ।
आफूले देशकै महानगर राजधानी केन्द्रको प्रमुख भएर नेतृत्व सम्हाल्दा हेटौडा नगरपालिकाको प्रमुख भएका डोरमणिप्रति स्थापितको अहम् अहंकारको रुपमा प्रकट हुदा मुख्यमन्त्रीको आफ्नो हैसियत देखाउँने मनोवृति हावी भएर पनि यो घटना घट्यो होलाभन्दा अन्यथा हुन्छ नै भन्ने लाग्दैन । दुवै राजनीतिकर्मिमा रहेको सुसुप्त इगोको बिज उपयुक्त मौकाको खोजीमा थियो प्रस्फुटन हुने मौका पायो भयो ।
भद्र सालिन व्यक्तिमा बिजेको इगोको बिज अरु फ्याङ्ग फुंगे स्थापित जस्ता पात्र र प्रवृतिको भन्दा घातक र डरलाग्दो हुन्छ जसको प्रमाण हो डोरमणि पौडेलले पड्काएको एम्बुस । आफु स्वयंले मुख्यमन्त्री दावी गरेर मुख्यमन्त्रीको दौडमा रहेका स्थापित डोरमणिको मन्त्रीमण्डलमा हिनताबोधको शिकार भएर बसेको प्रचण्डलाई पनि थाह थियो । स्थापितको राजनीतिक उपादेयता सकिएको छ । अब उसबाट लिनु केहि छैन तसर्थ दुवै अध्यक्षले फायर गर्न हौसाए । डोरमणि पौडेलले फायर खोले अन्तत चुरीफुरीसहित स्थापितको मन्त्रीपद खोसे।
व्यक्तिको उत्थान पतन, आरोह अवरोह आफ्नै कारणले बढी प्रभावित र आकर्षित हुन्छ, नेपाली राजनीतिमा अस्थिर चरित्र र उदण्डताले भोग्ने नियति यहि हो । लाग्छ राजनीतिको किनारमा पर्ने छन, स्थापित । ओरालो लागेको स्खलित नैतिकता लिएर हिजोको साख फर्काउँन हम्मे हम्मे पर्ने छ, स्थापितलाई ।